Samsung manokatra orinasa mpamokatra telefaona lehibe indrindra eran-tany | Androidsis
Eder Ferreno | | About us, Samsung
Samsung no mpitarika manerantany amin'ny tsenan'ny telefaona. Ny marika Koreana dia laharana amin'ny mpivarotra be indrindra isan-taona. Noho izany, toa te hihazona ny fahaizan'izy ireo mamokatra izy ireo ary angamba afaka mampitombo azy io. Satria nanokatra orinasa mpamokatra telefaona lehibe indrindra manerantany ny orinasa. Antenaina fa hotontosaina anio ao amin'ny tanànan'i Noida any India ny fitokanana azy.
Dingana iray lehibe amin'ny famokarana telefaona Samsung. Hatramin'ity zavamaniry ity dia mahazo fitomboana lehibe eo amin'ny sehatry ny famokarana izy ireo. Irery eto amin'ity tany ity Telefaona 120 tapitrisa no antenaina hamokarana isam-bolana.
Tsy tongatonga ho azy ny safidin'i India, toy ny Izy io dia iray amin'ireo tsena mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao. Maromaro ny marika mampiseho ny fahalianany amin'ity tsena ity. Samsung koa, ary ny fanokafana zavamaniry ao amin'ny firenena dia hanamora ny fitsinjarana. Ka hanana tombony kokoa noho ny mpifaninana izy ireo.
Miaraka amin'ity orinasa mpamokatra ity, Manantena ny hampiakatra 50% ny fahafaha-mamokatra i Samsung. Fampitomboana ny lanjany izay afaka manampy ny orinasa amin'ny fotoan-dehibe. Ho fanampin'izany, ireo vokatra izay havoaka amin'ity zavamaniry ity dia tsy ho smartphone ihany.
Hatramin'ny orinasa manantena fa afaka mamokatra vokatra elektronika hafa mitovy amin'izany. Anisan'ireo vokatra ny fahitalavitra. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny lisitry ny vokatra vokarin'ny orinasa amin'ity orinasa vaovao any India ity.
Samsung dia iray amin'ireo marika amidy indrindra eto India. Ity zavamaniry ity dia maneho dingana iray hafa amin'ny fanitarana azy ao amin'ny firenena. Mbola ho hita eo izany raha toa ka mihabe ny varotra ho an'ny orinasa Koreana. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung manokatra orinasa mpamokatra telefaona lehibe indrindra manerantany